Alaska Airlines yatanga chibvumirano chekodeshare neQatar Airways
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Qatar Kuputsa Nhau » Alaska Airlines yatanga chibvumirano chekodeshare neQatar Airways
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kutanga muna Chikunguru 1, chibvumirano ichi chinobvumidza vanofamba paQatar Airways kunyorera kufamba uye nyore kubatana kune dzinopfuura 150 nzira muAlaska network.
Alaska yakatanga kubatana kwayo neQatar Airways musi waZvita 15, 2020, nekugona kwenhengo dzeMileage Plan kuti dziwane mamaira kuQatar Airways ndege.
Musi waKurume 31, 2021, Alaska yakabatana zviri pamutemo pasirese uye yakawedzera kudyidzana kwayo neQatar Airways.
Mumwedzi inotevera, vashanyi veAlaska vachakwanisa kubhuka kufamba paQatar Airways nendege pakati peUS neQatar nekupfuura.
As Alaska Airlines inowedzera kusvika kwayo kwepasirese nevatinoshamwaridzana navo venyika, isu takazvikudza nhasi tazivisa kuvhurwa kwechibvumirano chekodeshare neQatar Airways, imwe nhengo yemubatanidzwa, izvo zvinowedzera kusimbisa kudyidzana pakati pendege mbiri idzi uye zvinopa vafambi sarudzo dzinonakidza uye dzakanaka.
Kutanga Chikunguru 1, chibvumirano chinobvumidza vanofamba pamusoro Qatar Airways bhuku kufamba uye nyore kubatanidza kune dzinopfuura zana nzira 150 muAlaska network. KuWest Coast, Qatar Airways ine basa risingamire ichibatanidza nzvimbo yayo huru muDhaha kuenda kumatatu eguta rekutanga reAlaska - Los Angeles ine nendege mbiri dzezuva nezuva, uye nendege dzezuva nezuva kuSan Francisco neSeattle - zvichibvumira kubatana kwakabatana.
"Tinofara kuve chikamu chekudyidzana kuri kusimukira neQatar Airways, imwe yendege dzepasi rose," akadaro Ben Minicucci, CEO weAlaska Air Group. “Sekuenderera mberi kwekufamba nendege, zvakakosha kupa vashanyi vedu nzira dziri nyore, dzinoreruka dzekufamba kuti vabude vagoona nzvimbo dziri kure zvakare. Qatar Airways 'nendege dzisingamire kubva kunzvimbo dzedu muSeattle, San Francisco neLos Angeles kuenda kuDoha uye zvinonongedza zvinopa vashanyi vedu mikana mikuru yekushanyira chero nyika yavanoda. ”
"Tinodada kufambisira mberi kudyidzana kwedu kwekutengeserana neAlaska Airlines uye tinogamuchira nhengo nyowani yemubatanidzwa wepasi rose kuQatar Airways 'runyorwa rwevanoshanda navo," akadaro Qatar Airways Group Chief Executive, Anokudzwa VaAkbar Al Baker. "Chibvumirano ichi, chakabatanidzwa nehukama hwedu huripo, zvichabatsira kubatanidza huvepo hwedu mudunhu iri uye nekupa Qatar Airways vafambi vanoenda nekudzoka kumasuwo edu gumi nemaviri eUS nekuwana mukana wekubatana kwakazara muUnited States."
Alaska yakatanga kubatana kwayo neQatar Airways musi waZvita 15, 2020, nekugona kwenhengo dzeMileage Plan kuti dziwane mamaira kuQatar Airways ndege. Musi waKurume 31, 2021, Alaska yakabatana nepasirese pasirese uye ikawedzera kudyidzana kwayo neQatar Airways kupa zvikwereti zvepamusoro zvakadzokedzana, kusanganisira kusarudza chigaro chakasarudzwa; kukoshesa kutarisa-mukati, chengetedzo uye boarding; imba yekutandarira uye yekuwedzera mikwende mvumo. Qatar Airways yanga iri nhengo yepasirese kubva 2013.
Mumwedzi iri kuuya, vashanyi veAlaska vachakwanisa kubhuka kuenda kuKatar Airways nendege pakati peUS neQatar nekupfuura kuenda kunzvimbo dzavanofarira muAfrica, Middle East neSouth Asia.